1. NgokweNkcazo yoMgaqo-nkqubo weKharityhulam noVavanyo (Curriculum and Assesssment Policy (CAPS)) weeLwimi kwiSigaba esiPhakamileyo (amabakala 7-9), abafundi kufuneka benze "ukufunda okuqingqiweyo kweetekisi zokufunda" ("formal study of literary texts"), kubandakanywa amabalana amafutshane, iinoveli, isihobe nedrama.
2. Fumana apha kuqhotyoshelwe uluhlu lwephondo lweencwadi ezicetyiswayo zokuFunda uNcwadi zamaBakala 7 – 9 zika-2018.
3. Kucetyiswa izikolo ke ngoko ukuba zijonge iNgcaciso eMfutshane yeCandelo lokuXhasa Amaziko Ngezibonelelo: 0005/2013 phambi kokuba zisebenzise uluhlu loncwadi lokugqibela luka-2018 ukuthenga uncwadi.
4. Izikolo maziqaphele ukuba injongo yolu luhlu kukunceda ootitshala beelwimi bamaBakala 7 – 9 ekukhetheni iitekisi zokufunda. Iitekisi zokufunda ezininzi zibandakanya imibuzo, ukwenza izicelo (applications) namanqaku aziingongoma eziphambili (notes) ukunika inkxaso abafundi. Malunga nezihloko ezithile kukho uncedo olufumanekayo kwi-intanethi. http://education.slims.gov.za
ISEKELA MLAWULI-JIKELELE LOLAWULO LWEKHARITYHULAM NOVAVANYO
"Final 2018 Lists: English Literature Study: Grades 7, 8, 9" (ubukhulu: 110 KB)
"Finale Lys vir 2018: Afrikaans Letterkundestudie Grade 7, 8, 9" (ubukhulu: 102 KB)
"Recommended Final 2018 Lists: African Languages Literature Study Grades 7, 8, 9" (ubukhulu: 110 KB)